Imbeko 20 Lite: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa ngokusemthethweni | I-Androidsis
I-Honor ilungiselela ukubonisa uluhlu lwe-Honor 20, Umhla wokuboniswa kwawo sele usemthethweni. Ezi ziimodeli ezimbini zokugqibela zorhwebo lwaseTshayina. Nangona ecaleni kwayo sinemodeli yoluhlu oluphakathi, yintoni iMbeko 20 Lite. Ifowuni ebisaziwa kutshanje kwimarike yaseTshayina, apho isungulwa khona ngegama elahlukileyo, kule meko Hlonipha i-20i, besele sithethile.
Ngoku ifowuni sele inentetho yayo yamanye amazwe. Ke sinayo yonke idatha kule Honor 20 Lite. Phakathi kwabo sele sisazi ukuba le smartphone intsha iza kusungulwa nini eYurophu. Ukongeza kwixabiso eya kuba nalo ekusungulweni kwayo.
Le fowuni yophawu yaseTshayina sisixhobo ilingana neHuawei P30 Lite. Ngapha koko, siyakubona oko baneenkalo ezininzi ezifanayo. Zombini kuyilo nakwiinkcazo zayo. Ke ziveliswa njengezinto ezimbini onokukhetha kuzo ngaphakathi kwinqanaba eliphakathi kuluhlu lwe-Android.
1 Iinkcukacha Hlonipha i-20 Lite
Iinkcukacha Hlonipha i-20 Lite
Kwinqanaba lobuchwephesha, kusishiya sinemilinganiselo ethile esinokuyilindela kolu luhlu. Ingqwalaselo ekhethekileyo ihlawulwe kwiikhamera kwifowuni, kunye nekhamera engasemva kathathu. Uyilo lulandela imo yomzuzu, kunye nescreen esine-notch ekubunjweni kwethontsi lamanzi. Kule meko, inzwa yeminwe yeminwe ibekwe ngasemva kwisixhobo. Le yinkcazo epheleleyo yeHonor 20 Lite:
Ukugcina ngaphakathi: I-128 GB (Yandiswa ukuya kuthi ga kwi-512 GB nge-MicroSD)
Iinkcukacha azitshintshi kwinto esiyibonileyo kwi-Honor 20i. Nangona kuphehlelelo lwayo lwamazwe aphesheya siyazifumana ngohlobo olunye ngokubhekisele kugcino kunye ne-RAM. Umahluko ophambili kule meko, kukuba uphawu lwaseTshayina lusishiya nesi sixhobo. Ngaphandle koko akukho lutshintsho xa kuthelekiswa nemodeli eboniswe eTshayina kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ifowuni elungileyo yeli candelo.
Iikhamera ngokungathandabuzekiyo ziyinto ebalulekileyo kwifowuni. Ikhamera engemva kathathu isetyenzisiwe kule Mbeko 20 Lite. Ndiyabulela kuyo, kuya kuba lula ukuthatha iifoto ezintle kuzo zonke iintlobo zeemeko, ngokungathandabuzekiyo ezenza ukhetho olulungileyo. Iikhamera zefowuni zinikwe amandla yi-AI. Sifumana isivamvo somnwe ngomnwe ngasemva kwaye sinokuvula kobuso emnxebeni. Ibhetri yayo yi-3.400 mAh, kunye nokutshaja ngokukhawuleza, kunye netshaja ye-10W.
Le Honor 20 Lite yenza ukungena kwayo isuka eFrance, ke ilizwe elingummelwane lelokuqala ukumiliselwa ngokusesikweni. Nangona yonke into ibonisa ukuba ukumiliselwa kwayo kwinqanaba laseYurophu izakuqhutywa nge-6 kaMeyi. Ke ngekhe silinde ixesha elide ukuthenga le fowuni intsha kuphawu lwesiTshayina. Nangona kufanele iqinisekiswe ukuba ngaba kukuphehlelelwa kwayo yonke iYurophu okanye eFrance kuphela.
Ifowuni ikhutshwe kuhlobo olunye ngokwe-RAM kunye nokugcinwa, eyi-4/128 GB. Ngelixa sinemibala eliqela ekhoyo kwifowuni. Abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha phakathi kohlaza okwesibhakabhaka, kunye nefuthe lomgangatho, kunye nomnyama. Ngokubhekisele kwixabiso laso, kwinto esele isaziwa, Ixabiso le-Honor 20 Lite iya kuba ngama-299 euros. Ixabiso elikhulu kule modeli.
Kuza njenge ukhetho olulungileyo kweli candelo le-premium mid-range ku-Android. Ke siza kubona ukuba abathengi bayayifumana le fowuni ngendlela elungileyo xa kusungulwa imakethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Imbeko 20 Lite: I-smartphone entsha kraca
USony uyeke ukuthengisa iifowuni eMzantsi Melika